Astrology Archives - Pyone Pyone Lay
ဒီဇင်ဘာလ ( ၁ )လစာဟောစာတမ်း တင်ပေးလိုက်ပါပြီ…. ဒီဇင်ဘာလ တစ်လစာဟောစာတမ်းကို ဆရာစိုင်း‌‌ကျော်မင်း မှ ကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါပြီမိတ်ဆွေတို့အနေဖြင့် ကံကြမ္မာအကောင်း၊အဆိုးများ/ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကို ဖတ်ရှုကြည့်ပြီး အများဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Like & Share ပေးကြပါ။ ခုနှစ်ရက်သား၊သမီးများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး၊ ကောင်းခြင်းသုခအဖြာဖြာ နှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ.။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဒီတစ်လအတွင်း သင်သည် မမျှော်လင့်သောနေရာ၊မမျှော်လင့်ထားသောသူများထံမှ ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်းများရရှိတတ်သည်။ ကိုယ်တကယ်ကြိုးစားထားသော အလုပ်ကိစ္စများကတော့ မအောင်မြင်တာမျိုး၊ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်ရတာမျိုးကြုံမည်။ ငယ်ရွယ်သူများအဖို့ အထူးဆန်းပွင့်နေသောကာလပင်ဖြစ်သည်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်းမွှေးပျံကျော်ဇောလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ချီးမွမ်းခံရမည်။ ရန်များတတ်သည်မနာလိုသူများ၊ အပြိုင်အဆိုင် များမည်။ (အထူးသတိထားပါ)။ အိမ်တွင်းရေးကိစ္စများကြောင့် လွန်စွာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ခရီးများမကြာခဏ ထွက်ရလိမ့်မည်။ မရောက်ဖူးသောဒေသ၊ ရပ်ဝေးမြေခြားတွေကို ရောက်ရမည့် …
အသက်ကြီးရင် အိုဇာတာကောင်း မကောင်းသိနိုင်မယ့် သင့်ဘယ်ဘက်လက်မလေး
အသက်ကြီးရင် အိုဇာတာကောင်း မကောင်းသိနိုင်မယ့် သင့်ဘယ်ဘက်လက်မလေး လူတိုင်းလူ တိုင်းဟာ ကံတရာကို ဘယ်သူ မှရှောင်လွှဲ လို့မရနိုင်ကြ ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်တယ်..။ ဒီကံတရာ ကိုလည်း ဘုရားက လွဲပြီး ဘယ်သူကမှ ကြိုတင် မမြင်နိုင်ဘူး ဆိုတာလည်း လူတိုင်း လက်ခံကြလိမ့်မယ်..။ သို့သော်လည်း လူတစ်ယောက် ရဲ့ကံ တရားကို အနီစပ်ဆုံး အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုတင် ခန့်မှန်းနိုင်တာဟာ ဗေဒင် နှင့် လက္ခဏာပ ညာရပ်ပါပဲ…။ အကျွန်နော် တွေ့တဲ့ ပို့လေး တစ်ခု ကတော့ လူ တစ်ယောက်ဟာ အသက်ကြီးလာတဲ့ အခါမှာ အိုဇာတာ ကောင်းမကောင်း ခန့်မှန်း နိုင်တဲ့ လက္ခဏာ အမှတ် …
လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးက သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာ သင့်ရဲ့ လက်ကောက်ဝတ် ပေါ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြောင်းရှိလဲ ဘာဖြစ်မလဲ လက်ဝါးပြင်က လမ်းကြောင်းတွေ လိုပဲ လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးတွေ ကနေ လည်း သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို သိနိုင်ပါတယ် ။ လက္ခဏာပညာ တတ်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တ ကူနဲ့ လူတိုင်းကြည့်ပြီး နားလည် နိုင်တဲ့ နည်းလေးကိုသုံးပြီး ကံကြမ္မာတစိတ်တပိုင်းကို ကြည့်လိုက် ရအောင်နော်။ပုံမှန်ဆိုရင်သာမန်လူ တယောက်မှာလက်ကောက် ဝတ်မှာလမ်းကြောင်း ၂ ကြောင်းသို့မဟုတ် ၃ ကြောင်းရှိတတ် ပါတယ် ။ လမ်းကြောင်း ၁ အပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းက လူတယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပြပါတယ် ။ လမ်းကြောင်း ထင်ရှားပြီး တဆက်တည်း ရှိမယ် …
မိန်းကလေး များအတွက် ယောင်္ကျားဆိုးနှင့်တွေ့နိုင်သော လက္ခဏာ
မိန်းကလေး များအတွက် ယောင်္ကျားဆိုးနှင့်တွေ့နိုင်သော လက္ခဏာ မိန်းမအပေါ် သစ္စာမရှိသူ၊ ရိုက်နှက်သူ၊ ငွေအသုံးကြမ်းသူ စသည်ဖြင့် မိန်းမဖြစ်သူကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်သော ယောင်္ကျားတွေရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေမှာလည်း သူ့မှာကျွန်မမှ မရှိရင် မဖြစ်ဘူး။ သူက လူတော်ပါ လို့ပတ်ဝန်းကျင်က အမြင်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အမြင်မှန်ကို မရချိန်အထိ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လိုပဲ နားချ နားထောင်မှာမဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အချစ်ကြောင့်ပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ယောင်္ကျား ဆိုးနဲ့တွေ့နိုင်ချေရှိသော လက္ခဏာဟာ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁. လက်သန်းအောက်ကနေ လက်ညှိုးအထိရှိသောလမ်းကြောင်း ပထမဆုံး လက်ကိုဖြန့်ကြည့် လိုက်ပါ။ လက်သန်းအောက်ကနေ လက်ညှိုးအထိသွားသော လက္ခဏာ လမ်းကြောင်းရှိ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းကိုတော့ မေတ္တာလမ်းကြောင်း လို့ခေါ်ပြီး လက္ခဏာ …
သင်အကြိုက်ဆုံး သစ်သီးကိုကြည့်ပြီး သင့်အကြောင်း ပြောပြမယ် သစ်သီးလေးတွေကို ကြည့်ပြီး သင်အကြိုက်ဆုံး သစ်သီးတစ်မျိုးကို အရင်ဆုံး ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီသစ်သီးကပြောတဲ့ သင့်အကြောင်းကို ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ 1. ပန်းသီးက သင် အကြိုက်ဆုံး သစ်သီးဆိုရင် သင်ဟာ အပေါင်းအသင်းတွေဆုံရင် စကား အများဆုံး ဒိုင်ခံပြောနေတတ်တဲ့သူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လျင်လျင်မြန်မြန်ချနိုင်ပြီး ရုတ်တရက် ဖြစ်လာတဲ့ ကိစ္စတွေကို ချက်ချင်းဆိုသလို ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ခရီးသွားရတာကို နှစ်သက်ပြီး မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာ အသစ်တွေကို သွားချင်နေ သူပါ။ သင်ဟာ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း ကောင်းသူတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး သင့်လက်တွဲဖော် အပေါ်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်မယ့် …
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ၊ အချုပ်အနှောင်ကင်းကင်း နဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းချင်တဲ့ ကြာသပတေးသားသမီးများအကြောင်း
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ၊ အချုပ်အနှောင်ကင်းကင်း နဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းချင်တဲ့ ကြာသပတေးသားသမီးများအကြောင်း ကြာသပတေး သားသမီးများ (၁) နားလည်ပေးနိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့သူတွေပါ။ပညာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ် တတ်တဲ့ သူတွေပါ ။ (၂) ရောက်လေရာတိုင်းမှာ လူတွေရဲ့ အာရုံ ကို ဖမ်းစားထားနိုင်တဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ အသွင်အပြင် ကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူ တွေပါ ။ (၃) မွေးရာပါ ခေါင်းဆောင် စွမ်းရည် ကိုပိုင်ဆိုင် ထားသူ တွေပါ ။ ဒါကြောင့်ဘယ်လို အလုပ် ကိုပဲ လုပ်လုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ကို ရကြပါတယ် ။ (၄) အလုပ် အရမ်း ကြိုးစားတဲ့ သူတွေဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှု …
အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော လက်ဖဝါးပြင်မှ ထူးခြားအမှတ်အသား (၉) မျိုး
အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော လက်ဖဝါးပြင်မှ ထူးခြားအမှတ်အသား (၉) မျိုး အလွန် ထူးဆန်းသော သဘာဝ အင်အား တို့သည် လူတစ်ဦးချင်းစီ အတွက် သီးသန့်ရှင်သန်လျှက်ရှိရာ ထိုအစွမ်း တို့၏ အံ့ဖွယ်ရာ သတ္တိထူးတို့က လက္ခဏာရှင်ကို စိုးမိုးလျှက်ရှိကြသည်။ ထို့စွမ်းအင်တို့၏ အမှတ်အသားကို လက်ဖဝါးပြင်တွင် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနပြုရာတွင် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး လက္ခဏာရှင်ကို ရာနှုံန်းပြည့် ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ် ကိုပေးသော အထူးအမှတ်အသားများ ဖြစ်ပေါ် လာပေ သည်။ ထိုအမှတ်အသားများစွာထဲမှာ အလွန်အတွေ့များပြီး အမှန်တစ်ကယ် လည်း လူတစ်ယောက်၏ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ကို ဖန်တီးသော လက်ဖဝါးပြင်မှာ ထူးခြားသော အမှတ်အသား (၉) မျိုးအကြောင်းကို စာရှည်မည်စိုးသဖြင့် အနှစ်ချုပ် တင်ပြ လိုပါ …
လက်တွဲဖော်ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာလက်ဖဝါးခြင်းပူးကြည့်ရအောင် လက်ဝါနှစ်ဖက်ကို ပူးကပ်ကြည့်ပြီးတော့သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းရအောင်ဒီတခါပြောပြမှာကတော့ လက်နှစ်ဖက်ကို ပူးကြည့်လိုက်လို့ သင့်ချစ်သူ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပါ … ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ၁၀၀% မှန်တယ်လို့ စာရေးသူမဆိုလိုပါဘူး။ သင့်ချစ်သူရဲ့လက်ဖဝါးကိုကြည့်လိုက်ပါ … ။ သင့်ချစ်သူရဲ့လက်ဖဝါးကအချစ်လမ်းကြောင်းကနေသူတို့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို အနည်းငယ် မှန်းဆကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်နော်စာဖတ်သူတို့ရဲ့ စိတ်သဘောထားနဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်မဆိုင်ဘူးဆိုတာကို ဝေဖန်ချက်ပေးလို့ရပါတယ် … ။ ၁။ လက်ဖဝါးပေါ်ကအချစ်ရေးလမ်းကြောင်း အတူတူဖြစ်နေရင် သင့်ချစ်သူရဲ့လက်ဖဝါးဟာ အခုလို ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရင် အရမ်းကို ကံကောင်းတဲ့ သူလို့ မှတ်ယူ လိုက်ပါတော့နော် ။ ဒီလက်ဖဝါး ပိုင်ရှင် မျိုးဟာ သင်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို တကယ် အလေးနက် …
ထီဖွင့်တော့မှာမို့ အစွမ်းထက်မြတ်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
ထီဖွင့်တော့မှာမို့ အစွမ်းထက်မြတ်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ထီဖွင့်ဖို့လည်းနီးလာခဲ့ပါပြီ ဒါကြောင့် အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ မင်္ဂလာပါ သူဌေး မင်းထီဆိုင်ကြီးမှ ကူးယူဖော်ပြအပ်ပါသည်။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်းတစ်စောင်မှာ ဖော်ပြထားပြီး အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ် အတိုချုပ်က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ရှိစဉ်က ကောဏ္ဍဝေန မထေရ်ကြီးသည် ပထမ စာရေးတံမဲကို အမြဲတမ်း ပေါက်ခဲ့၏ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်း ဤသို့ ဖြစ်ရပါစေသတည်း ဟု ဆိုထားပါတယ် ။ ရှေးဟောင်းပေစာ တစ်ခုထဲမှာလည်း ဒီဂါထာရဲ့ အစွမ်းကို အထူးအစွမ်းထက်မြက်ကြောင်း ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုဂါထာကို ဆဋ္ဌမအာရုံ ပရိသတ်တွေအတွက် စေတနာရှေ့ထားလို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ဂါထာကို မဖော်ပြမီမှာ …